Siyaasadda Khaaska ah | WatercolorPNG
Suuq-geynta Emailka (haddii lagu dabaqi karo): Markaad ogolaansho ka haysato, waxaan kuu soo diri karnaa emayl ku saabsan dukaankeenna, alaabta cusub, iyo wixii cusbooneysiin ah.
Haddii aan weydiisano macluumaadkaaga shakhsiyeed ee sabab labaad, sida suuq-geynta, waxaanu si toos ah ku weydiin doonaa ogolaanshahaaga ama waxaad ku siineysaa fursad aad ku sheegto maya.
Haddii aad doorato ka dib, waxaad bedeshaa maskaxdaada, waad ka laaban kartaa ogolaanshahaaga si aan kuula soo xariirno, ururinta sii wadida, isticmaalka ama bixinta macluumaadkaaga, wakhti kasta, adoo nagala soo xiriiraya info@watercolorpng.com ama email anaga:
Dukaankeena waxaa lagu marti qaaday Shopify Inc. Waxay na siiyaan meherad internetka ah oo ku yaala internetka oo noo ogolaanaya inaan iibino alaabta iyo adeegyadeena.
Macluumaadkaaga waxaa lagu keydiyaa Diiwaanka Diiwaangelinta xogta, kaydka xogta, iyo Diiwaanka guud ee Diiwaangelinta. Waxay ku hayaan xogtaada xafiis sugan oo ka dambeeya dab-damis.
All Albaabo lacagta si toos ah u hoggaansamaan heerarka loo dejiyey by PCI-DSS sida maamula Standards Security Council PCI ah, taas oo ah dadaal wadajir ah oo ah noocyada sida Visa, Mastercard, American Express iyo Baro.
Haddii aad na siiso macluumaadka kaararka deynta, macluumaadka waxaa lagu qortaa iyada oo la isticmaalayo tiknoolajiyada saqafka sirta ah (SSL) oo lagu keydiyay AES-256. Inkasta oo aan lahayn habka loo gudbiyo Internetka ama kaydinta elektaroonigga waa 100% ammaan ah, waxaanu raacnaa dhammaan shuruudaha PCI-DSS iyo hirgelinta heerarka warshadaha guud ee la aqbalay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad: helato, saxdo, isbeddesho ama tirtirto macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aan kaa hayno, diiwaangelineyno cabasho, ama aad rabto macluumaad dheeraad ah la xiriir Sarkaalka Qarsoodiga Khaaska ah ee info@watercolorpng.com ama boostada
WatercolorPNG,matalaya Vadim Rozov, S. Kovalevskoy 49 / 64 Dnipro, 49000 Ukraine